Umatshini wokuvelisa isichumisi esingaxutywanga-YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Sinamava apheleleyo kumgca wokuvelisa i-extrusion ye-extrusion eyomileyo. Asigxili kuphela kuyo yonke inkqubo yekhonkco kwinkqubo yemveliso, kodwa sihlala siqonda iinkcukacha zenkqubo nganye yemveliso kwaye siphumelele ngempumelelo kunxibelelwano. Inkqubo epheleleyo yemveliso yenye yeenzuzo eziphambili zentsebenziswano yakho kunye ne-YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd Sinikezela ngezisombululo zemveliso ezenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Akukho kumisa umgca wokuvelisa umgquba ingavelisa isichumisi esiphakamileyo, esiphakathi kunye nesisezantsi kwizityalo ezahlukeneyo. Umgca wemveliso awudingi ukuba womile, notyalo-mali oluncinci kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi.
I-roller ngaphandle kokumisa i-granulation ekhutshiweyo inokuyilwa ibe ngamasuntswana eemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu kwaye inokukhutshelwa ngaphandle ukuvelisa ubungakanani obahlukeneyo.
Ngokubanzi, isichumisi esidibeneyo siqulathe ubuncinci izondlo ezibini okanye ezintathu (i-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium). Inempawu zomxholo ophezulu wezondlo kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. Isichumisi esihlanganisiweyo sidlala indima ebalulekileyo kuchumiso olungeleleneyo. Ayikwazi ukuphucula kuphela ukusebenza kakuhle kwezichumiso, kodwa ikwakhuthaza isivuno esizinzileyo kunye nesiphezulu sezityalo.
Sinikeza iseti epheleleyo yemigca yokuvelisa i-granulation eyomileyo engadingi ukuba yome. Izixhobo zomgca wokuvelisa ikakhulu zibandakanya umxube kunye nediski feeder, umatshini wokuqengqeleka we-extrusion granule, umatshini we-roller sieve, ibhanti yokuhambisa, umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo kunye nezinye izixhobo ezincedisayo.
1. Ingcinezelo yoomatshini esetyenziswayo isetyenziswa ngaphandle kokufudumeza okanye ukufuma izinto eziluhlaza.
2. Ilungele imathiriyeli ekrwada ethe-ethe, efana ne-ammonium bicarbonate
3. Akukho sidingo sokomisa inkqubo, kutyalo-mali oluncinci kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi.
4. Akukho manzi amdaka, khupha igesi, akukho kungcoliseka kwendalo.
5. Ubungakanani besahlulo samasuntswana bufana, kwaye akukho lucalucalulo kunye nokudityaniswa.
6.Ubumbeko lobumbano, ubuchwepheshe obuphambili, ukusebenza okuzinzileyo kunye nolondolozo olufanelekileyo.
7.Ukusebenza ngokulula, kulula ukuqonda ulawulo oluzenzekelayo, kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.
8. Kukho uluhlu olubanzi lwezinto ezisetyenziswayo ngaphandle kwemfuno ezizodwa zomsebenzi.
I-extrusion granulator eyomileyo ibandakanya izithako ezizenzekelayo, iibhanti zokuhambisa, abaxube be-biaxial, ii-disc feeders, oomatshini be-extrusion granulation, ii-roller sieve, iindawo zokugcina ezigqityiweyo, oomatshini bokupakisha ngokuzenzekelayo, njl.
1. Umatshini weBatching Dynamic
Umatshini wezinto ezizenzekelayo ukondla izinto ezingavunyelwanga ngokomgaqo wefomula nganye, onokugqibezela ngokuzenzekelayo inkqubo yokubambisa ngokuchaneka okuphezulu nokusebenza ngokukuko, ukuqinisekisa umgangatho wesichumiso. Emva kwezithako, izinto zihanjiswa kwi-blender ye-axis axis.
2. Umxhubi wesichumisi seShaft esiphindwe kabini
Umxhubi wediski usebenzisa i-cycloid yenaliti yokunciphisa ivili ukuqhuba i-spindle, emva koko uqhube ingalo evuselelayo ukuze ujikeleze kwaye uqhube. Ngeflip eqhubekayo kunye nokushukumisa iincakuba kwisandla sokuxuba, izinto ezingavuthiyo zixutywe ngokupheleleyo. Izinto ezixubekileyo zikhutshiwe kwindawo yokuphuma ezantsi. Le diski isebenzisa ipleyiti yeplypropylene okanye ulwelwesi olungenasici, ekungekho lula ukunamathela kwaye kulula kwaye kuyasebenza.
3. I-roller extrusion granulator
Izinto ezixubileyo ezingumxube zithuthwa zisuswa kumjelo wokuhambisa ibhanti usiya kwi-disc feeder, ethi ithumele ngokulinganayo imathiriyeli kwi-roller extruder ezine phantsi kwe-feeder nge-hopper. Lo matshini uyawucofa umbandela ube ziingceba kwigumbi elaphukileyo phantsi kwesondo ngokusebenzisa umjikelezo ojikelezayo ojikeleza phezulu ombane, emva koko wahlule amasuntswana afunekayo njengoko intonga yamazinyo eengcuka ezihamba kabini. Le mqengqeleki yenziwe umhlwa-enganyangekiyo entsha, banxibe enganyangekiyo kunye nempembelelo enganyangekiyo ingxubevange eziphathekayo.
4. I-Rotary Drum Screene
Amasuntswana egranatic eyandisiweyo ahanjiswa asiya kwisihluzi se-roller ngesiphatho sebhanti, kwaye amasuntswana akumgangatho ophantsi aphuma kuphuma kumasuntswana amakhulu kwicala ngembobo yescreen, emva koko athunyelwe kwi-disc feeder yegranulation yesibini, kwaye amasuntswana afanelekileyo ayondliwa evela indawo yokuphuma esezantsi kwaye uhanjiswe kwindawo egqityiweyo.
5. Ukupakisha ngobungakanani be-elektroniki
Nge-hopper, amasuntswana afanelekileyo alinganiswa ngokobungakanani, emva koko ahlanganiswe ngumatshini wokupakisha ozenzekelayo.